प्रचण्डले भने- कठै ! विचरा केपी ओली, ओरालो लाग्नुभयो (भिडियो) – Nepal Press
प्रचण्डले भने- कठै ! विचरा केपी ओली, ओरालो लाग्नुभयो (भिडियो)
२०७८ असार १४ गते १८:११
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अब ओरालो लागेको दावी गरेका छन् । यद्यपि अझै पनि ओलीले षडयन्त्रका गोटीहरू चाल्न सक्ने उनको आशंका छ ।
प्रकाशित: २०७८ असार १४ गते १८:११